Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKWIKWỌ ASIAN Faiq Bolkiah Akụkọ nwata na gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere Ndụ
Ihe omuma anyi n’enye gi ihe omuma banyere Faiq Bolkiah’s Childhood Story, Biography, Early Life, Girlfriend Facts, Personal Life, Web, Life, na ihe ndị ọzọ ama ama site na mgbe ọ bụ nwata rue mgbe amaara ya.
Otu n'ime foto nwata mara nke Faiq Bolkiah. : Instagram.
Ee, onye ọ bụla maara na winger bụ otu n'ime ndị kasị nwee ọkaibe n'egwuregwu ụwa. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gụrụ akụkọ ndụ Faiq Bolkiah, nke bụ ezigbo nghọta. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Akụkọ Faiq Bolkiah nke nwata:
Faiq Jefri Bolkiah mụrụ na 9th ụbọchị nke May 1998 na Los Angeles na California, USA. Ọ bụ otu n'ime ụmụ ejima amụrụ obere nne ya a ma ama na nna ya, Jefri Bolkiya (Onyeisi Brunei).
N’agbanyeghi na amuru Faiq n’Amerika ma nwee mba abuo (ndi America na ndi Bruneian), o toro tolitere na United Kingdom n’ilepuru onye nlekota ya –Dennis Wallace (onye amuru NBA nke oma).
Na-etolite na Berkshire na UK n'akụkụ nwa nwanne ya - Ukasyah, Faiq na-eto eto bụ onye hụrụ bọọlụ n'anya nke na-enwekarị obi ụtọ iji bọl na ụkwụ ya pụọ ​​n'ọhịa. N'ezie, football bụ egwuregwu nke weere ebe etiti n'oge ọ bụ nwata.
Faiq Bolkiah tolitere na Berkshire na UK 📷: IG na MapIt.
Faiq Bolkiya Friil:
Ọbụna tupu ịkwaga UK site na obodo ya - Brunei (ebe o toro too), Faiq adịworị onye na-anụ ọkụ n'egwuregwu bọọlụ, ndị nne na nna ya bara ọgaranya na-akwado agụụ ya.
Dị ka nke a, ha zipụrụ ya 11,000 kilomita site na Brunei ka ọ mụọ ma zụlite onwe ya na football na United Kingdom, na-ewepụ ihe ndọpụ uche nke na-eso akụnụba ezinụlọ ya.
Nwa okorobịa Faiq Bolkiah ya na nne na nna ya. : Enyo.
Ulo akwukwo na ulo oru Faiq Bolkiah:
N'ihi nlekọta na nlezianya nke onye nlekọta ya - Dennis Wallace, Faiq nwere ike ịme ka agụmakwụkwọ dị mma na Woolton Hill Junior na Berkshire na-egwu bọl maka akụkụ obodo - Woolton Hill Argyle.
Ọkọlọtọ nke klọb ebe o weere nzọụkwụ mbụ ya na egwuregwu asọmpi. : WooltonHill.
Egwuregwu bọọlụ gara gụọ akwụkwọ na Thorngrove Prep School na obodo dị nso na Highclere ebe onye na-elekọta ya malitere ịmegharị nke ga-emecha hụ ka nwata ahụ dị afọ 11 malitere igwu egwu maka AFC Newbury na 2009.
Nduzi mbu nke Faiq Bolkiah:
You mara na Faiq pụtara na nke mbụ ya na AFC Newbury maka maka anya ya na ọgụgụ isi ya na bọọlụ? Karịsịa, nwatakịrị ahụ dị nnọọ ala n'ụwa, nke mere na ọ bụ naanị ndị ọrụ nchịkwa ole na ole maara na ezinụlọ ya bara ọgaranya na mberede.
Disdị mkpirisi dị ala adịghị iche mgbe Faiq malitere igwu egwu maka Southampton na oge na-esote. Nwatakịrị ahụ dị umeala gara n’ihu soro ya nwee mkparịta ụka dị mkpirikpi na Reading FC tupu ọ banye na Arsenal FC n'afọ 2013.
Ọ ghọrọ akụkụ nke usoro ndị ntorobịa nke Arsenal na 2013. 📷: Facebook.
Akụkọ Faiq Bolkiah - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Ọ bụ na Arsenal ka Faiq dị afọ 15 meriri n'inwe aha mbụ ya dị mkpa ka ọ nwetara aha ya na ntanetị iji nyere ndị otu U Gunners aka inwe mmeri nke Lion City na ntuli aka na nhọrọ ntorobịa nke Singapore.
Mgbe Faiq nabatara Arsenal na 2014, ọ nwere nchekwube banyere ọdịnihu dị mma na Chelsea FC, nke ọ binyere aka ya na afọ ahụ. Agbanyeghị, ihe gara ebe ndịda n'ihi na enyereghị ya oge egwuregwu zuru oke na usoro ntorobịa nke klọb.
Fortune mụghị ya ọnụ ọchị na Chelsea FC: FB.
Akụkọ Faiq Bolkiah - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
Ya mere, nwa nwoke nwere nnukwu agụụ hapụrụ otu ahụ otu afọ ka emesịrị na 2015 ka ya na Stoke City nwee ike tupu ya abanye Leicester City na 2016. Mgbe ọ bịanyere aka n'akwụkwọ maka ndị Foxes, Faiq bụ ihe omume oge niile maka ndị otu agụmakwụkwọ Foxes, gụnyere na 2016 / 17 UEFA Youth League.
Ọsọ ọsọ gaa na Machị 2020, Faiq na-egwuri egwu maka ndị otu echebere Leicester, ọ kabeghịkwa ịmalite izizi mbụ nke ndị Foxes n'agbanyeghị na ọ bụ onye isi ama ama na mba Brunei ma bụrụ onye amaara ama. onye kachasị agba bọọlụ n'ụwa. Kedu ụzọ ụzọ ọrụ ya siri dị, nke ọzọ, dịka ha na-ekwu, ga-abụ akụkọ mgbe niile.
Winger bụ onye ama ama n'agbanyeghị na ọ naghị eme egwuregwu mbụ maka Leicester. 📷: Mgbaru Ọsọ.
Ọnye na-bụ Faiq Bolkiah's Girlfriend?
N'ịga n'ihu na ndụ ịhụnanya nke Faiq Bolkiah, ọ ga-abụ ihe ezi uche na-adịghị na ya ịmara na ọ nweghị enyi nwanyị naanị n'ihi na mbọ a gbara iji kee ya na otu nwanyị enweghị afọ ime.
Nnyocha nke peeji nke onye nkuaka winger na Instagram ga-ekpughe ọtụtụ foto ya na ụmụ nwanyị dị iche iche. Dika odi, o siri ike igwa enyi ya nwanyi site na ndi ozo. Amabeghị ma Faiq o nwere nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị n’alụghị di.
Onye bụ Faiq Bolkiah mkpakọrịta nwoke na nwaanyị? : LB & Instagram.
Ndụ ezinụlọ nke Faiq Bolkiah:
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe agaghị ekwe omume ikwu maka Faiq Bolkiah na-enweghị izo aka n'ezigbo ezinụlọ ya. Anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara ndị ezinụlọ Faiq Bolkiah malite na ndị mụrụ ya.
Banyere Nna Faiq Bolkiah:
Jefri Bolkiah bụ nna mgbụgba. Amụrụ ya na ụbọchị nke 6 nke November 1954 na Omar Ali Saifuddien nke III, Sultan nke Brunei nke 28. Ya mere, Jefri bụ Onyeisi na onyencheche n’ocheeze, mana ọ ghọrọghị Sultan. Kama, nwanne ya nwoke nke okenye bụ Crown Prince Hassanal Bolkiah weghaara oche-eze ahụ mgbe Omar kpebiri mkpebi iwepu. Jefri bụbu onye Minista ego nke Brunei nwere ọgaranya. Ọ bara ọgaranya nke ukwuu ma bie ụdị ndụ dị oke egwu.
Nna Faiq Bolkiah Jefri bara ezigbo ọgaranya. 📷: Onye na-enye ndụmọdụ.
Banyere nne Faiq Bolkiah:
N'oge edepụtara akụkọ ndụ Faiq Bolkiah na Eprel 2020, amabeghị ọtụtụ ihe banyere nne ya. Otú ọ dị, onye uwe ojii ahụ gosipụtara ozugbo na nne ya na nna ya na-akwado ya iji nyere ya aka iru nrọ ya nke ịbụ ndị ịgba ọsọ. N'ezie, ọ na-ele ha anya dị ka ndị nlereanya maka ịzụ ya n'ụzọ mmetụta uche na n'ụzọ anụ ahụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ ga-abụ nnukwu nsogbu maka ide banyere akụkọ nwata Faiq Bolkiah na-ekwetaghị ọrụ nke nne na nna ya na-akwado ya.
Banyere ụmụnne Faiq Bolkiah:
Ọtụtụ mmadụ amaghị na Faiq nwere nwanne ejima ejiri aha ya - Qiana Faiq Bolkiah. Qiana bụ ụdị nwanyị mara mma nke Faiq. Ha hụrụ onwe ha n'anya ma jiri ibe ha kpọrọ ihe ma nwee foto mara mma nke na-ekwu banyere kemịkal n'etiti ha. Dị ka Qiana, Faiq nwere ụmụnne ụmụnne ndị ọzọ na ụmụnne ya ndị amachaghị banyere ha.
Faiq Bolkiah na nwanne ya nwanyị bụ Qiana Faiq Bolkiah. 📷: Gram.
Banyere ndị ezinụlọ Faiq Bolkiah:
N'ịga n'ihu na ezinụlọ Faiq Bolkiah na mgbọrọgwụ ezinụlọ, nna nna ya bụ Omar Ali Saifuddien III, ebe ọ nweghị ndekọ nke nne na nna ya ochie. Nwanne nna Faiq bụ Crown Prince Hassanal Bolkiah, Sultan nke Brunei, ebe otu onye nwanne nne ya aha ya bụ Ukasyah. Agbanyeghị, amabeghị ọtụtụ ihe banyere nwanne nna Faiq, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya.
Ndụ nke Faiq Bolkiah:
Ekwu okwu banyere njirimara Faiq Bolkiah, ị maara na oke agụụ, ịdị umeala n'obi, na elekwasị anya na-achịkwa ya? Ọzọkwa, winger na-arụsi ọrụ ike ma nwee nnukwu ọchịchọ dị ka ndị a mụrụ n'okpuru akara Zodiac Taurus.
Mgbe Faiq anaghị azụ ma ọ bụ na-egwu bọl, enwere ike ịchọta ya na-enwe mmasị na egwuregwu ndị nwere egwuregwu gụnyere mgbakwunye basketball, ịnya ịnyịnya, njem, igwu mmiri na isoro ezinụlọ ya na ndị enyi ya nwee ntụrụndụ.
Bọọlụ basketball guzobere n'akụkụ ịhụnanya ya maka football. 📷: Gram.
Faiq Bolkiah si ebi ndụ:
Banyere otu Faiq Bolkiah si eme ya ma na-emefu ego ya, ị maara na akụ ya bara uru na 2020 ruru ihe ruru ijeri $ 20? Otutu akụ na ụba nke winger sitere na nketa ya dị ka onye so na ezinụlọ Brunei.
Ọzọkwa, Faiq na-enweta nnukwu ego site na nkwado ndị dịka Nike yana ego na ụgwọ ọrụ ọ na-enweta maka ịgba bọl. Ọ baghị uru ikwu, Faiq nwere ike ibi n’ụlọ ọ bụla ọ chọrọ n’agbanyeghi ego ọ ga-akwụ. O nwekwara ụgbọ ala ndị mara mma na ụgbọ mmiri n'ụdị ndị dị oke ọnụ nke bụ akụkụ nke ndị nnọchianya.
O ruru ijeri $ 20 n'oge edere ebe Messi na Ronaldo ruru $ 400 na $ 460 n'otu n'otu. : Mirror na PhotoFunia.
Eziokwu Banyere Faiq Bolkiah:
Iji chịkọta akụkọ gbasara nwata anyị na akụkọ gbasara Faiq Bolkiya, ebe a bụ akụkọ amachaghị banyere winger.
Eziokwu nke abụọ: Okpukpe:
Faiq bụ onye kwere ekwe na-eme Sunni Islam. Nkwenkwe a kachasị na Brunei (na-ede ihe dịka 67% nke okpukpe mba ahụ). Ọ bụkwa okpukpere chi nke ezinụlọ eze.
Eziokwu # 2: Pita:
Ọ bụghị oge ọ bụla ị hụrụ ndị egwuregwu bọọlụ nwere nnukwu nwamba dịka anụ ụlọ, ọkachasị mgbe pusi ahụ bụ agụ. Nke ahụ bụ ihe Faiq nwere. Ya na Agụ na ya nọ kemgbe ọ bụ nwa.
Lelee onye na-acho ya na anu ulo ya. : Enyo.
Eziokwu nke 3: Ogbugbu:
N'adịghị ka ọtụtụ ndị ọkachamara egwuregwu bọọlụ, Faiq enweghị akara ma ọ bụ nka dị ka Eprel 2020. Ọ dị mma na ogo ya na mkpokọta nke 5 ụkwụ, 9 sentimita asatọ & 70kg, n'otu n'otu.
Eziokwu nke 3: Trivia:
Afọ ọmụmụ Faiq Bolkiah - 1998 bụ afọ dị mkpa nke mmemme teknụzụ na nke ntụrụndụ. Ọ bụ afọ nke etinyere igwe nyocha Google. 1998 hụrụ ịhapụ fim ndị a ma ama dịka Titanic na Saving Private Ryan.
Offọdụ n'ime mmalite na wepụtara nke mere 1998 afọ dị ụtọ. : Google na IMDB.
Aha n'uju Faiq Jefri Bolkiah
aha otutu N / A
Ụbọchị ọmụmụ 9th May 1998
Ndị nne na nna Jefri Bolkiah (Nna)
Education Woolton Hill Junior & Thorngrove Prep .lọ akwụkwọ
Egwuregwu Onye na-agba egwu / Midian
Deede Onye isi alaeze Prince Hassanal Bolkiah
Nna nna Omar Ali Saifuddien III (Nna nna)
omume ntụrụndụ ịgba bọọlụ, ịgba ịnyịnya, ịnyagharị na igwu mmiri.
Ngwakọta Net $ 20 ijeri
elu 5 ụkwụ, 9 sentimita
Daalụ maka ịgụ ihe edemede a banyere akụkọ ndụ Faiq Bolkiah. Na Ndụ ndụ anyị na-agba mbọ maka izi ezi na izi ezi n’usoro anyị na-ewepụta eziokwu banyere ndu na akụkọ nwata. Ọ bụrụ n’ịhụta ihe ọ bụla dị njọ n’isiokwu a, biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụ tinye okwu na igbe dị n'okpuru.
Bọchị agbanwee: Ọktọba 30, 2020